Vondron'olona iray tena mahay dia natokana ho an'ny fitaovana fifanakalozana hafanana simika avo lenta miaraka amin'ny traikefa an-taonany maro momba ny R&D sy ny famokarana. Ahitana injeniera zokiolona 6, injeniera 17, injeniera mpanampy 24 ary teknisiana 60 ny ekipa.
Ny ekipan'ny Senior Auditors anatiny an'ny rafitra fitantanana kalitao ISO
Ny fivoriana mahazatra anay amin'ny famonoana olona 6S
Ny marika manerantany dia tohanan'ny kolotsaina orinasa. Fantatray tsara fa ny kolontsain'ny orinasany dia azo alaina amin'ny alàlan'ny Impact, Infiltration ary Integration ihany. Ny fampandrosoana ny vondrona misy anay dia notohanan'ny soatoaviny lehibe nandritra ny taona lasa ------- Fahamarinana, Fanavaozana, andraikitra, fiaraha-miasa.
Ny vondrona misy anay dia manaraka hatrany ny fitsipika, mifantoka amin'ny olona, ​​fitantanana tsy fivadihana, kalitao faran'izay tsara, laza malaza Premium lasa fahamarinana ny loharanon'ny loharanon'ny fifaninanana misy eo amin'ny vondrona misy anay.
Manana izany toe-tsaina izany isika, nanao ny dingana rehetra tamin'ny fomba maharitra sy hentitra.
Ny fanavaozana no fototry ny kolontsain'ny vondrona misy antsika.
Ny fanavaozana dia mitarika amin'ny fampandrosoana, izay mitarika fitomboan'ny tanjaka, Ny zava-drehetra dia avy amin'ny fanavaozana.
Ny olontsika dia manao fanavaozana amin'ny hevitra, mekanisma, teknolojia ary fitantanana.
Ny orinasanay dia maharitra amin'ny laharam-pahavitrihana mba handraisana ireo fanovana stratejika sy tontolo iainana ary ho vonona amin'ny fotoana hisongadinana.
Ny vondrona misy anay dia manana fahatsapana andraikitra lehibe sy iraka ho an'ny mpanjifa sy ny fiaraha-monina.
Ny herin'ny andraikitra toy izany dia tsy hita, fa azo tsapaina.
Io foana no hery manosika ny fampandrosoana ny vondrona misy anay.
Miezaka izahay manangana vondrona miara-miasa.
Ny fiaraha-miasa hamoronana toe-javatra mandresy dia heverina ho tanjona lehibe indrindra amin'ny fampandrosoana ny orinasa.
Amin'ny fanatanterahana amin'ny fomba mahomby ny fiaraha-miasa amin'ny fahamendrehana.
Ny vondrona misy anay dia nahavita nahatratra ny fampidirana loharanon-karena, ny fifanatonana, avelao ny olona matihanina hilalao feno ny mahaizy azy
Miara-miasa isika toy ny mandray anjara amin'ny ady an-trano,
ny mpiasa rehetra dia mampiseho ny toe-tsain'izy ireo miady, mivaona ary tsy mahazaka olona.
Tanora izahay, ho avy,
eto Shanghai izahay.